ဘ၀အတွက် အရေးပါသော အလုပ်ရွေးမယ်ဆိုရင်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ဘ၀အတွက် အရေးပါသော အလုပ်ရွေးမယ်ဆိုရင်….
ဘ၀အတွက် အရေးပါသော အလုပ်ရွေးမယ်ဆိုရင်….
Posted by koyin sithu on May 29, 2012 in How To.., Ideas & Plans, Think Different | 25 comments
လူဆိုလို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ မဖြစ်မနေ ဘ၀ကို လက်တွဲလျှောက်ဖို့ ပါလာတာကြီးက အလုပ်ဆိုတာပါပဲ။ လူတို့နေထိုင်ရာ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အလုပ်မျိုးစုံရှိသလို အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံတွေကလည်း အများကြီးပေါ့ဗျာ။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ၊ အလုပ်မရှိသော သူသည် ဘ၀မရှိနိုင်၊ အလုပ်ဖြင့်ဘ၀ကို တည်ဆောက် စသည်သဖြင့်ပေါ့….။ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာလည်း ရွာသူား ကိုယ်စီ အလုပ်အကိုင်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူများရှိသလို၊ အခုထက်ထိ အလုပ်ရွေးချယ်သူများလည်း ရှိကောင်း ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အလုပ်ဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံး အရာတစ်ခုပါ။ လွယ်လွယ်လေး ပြီးပြီးရော ရွေးချယ်လိုက်လို့ မရသလို ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားလို့လဲ မရပေဘူးပေါ့ဗျာ။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဘမင်းသိင်္ခရေးသားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် ဇာတ်လမ်းမှ ဦးဂွမ်တီက အလုပ်ရွေးချယ်မှု ပုံစံ၊ သဘောထား၊ အတွေးအမြင်တို့ကို ကောက်နှုတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အလွမ်းပြေဖြစ်သလို၊ စာဖတ်သူ ရွာသူားများအနေနဲ့လည်း ဖတ်အပြီးမှာ အကျိုးတစ်ခုခုပွားမိမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးနောက် မဟာဘုတ်ဗေဒင်အလာ နေ့နံအလိုက် အကျိုးပေးသော လုပ်ငန်းများကို ကျွန်တော်က ရိုးသားစွာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ်…။ …………
အလုပ်အတွက် အလောသုံးဆယ် မလုပ်စမ်းပါနဲ့ကွ။ အထူးသဖြင့် အသက်မွေ ၀မ်းကြောင်းအလုပ်ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်စမ်းပါကွ။ လူတွေဟာ ခြောက်လ တစ်နှစ်လောက် ၀တ်ရမယ့် လုံချဉ်ကလေးတစ်ထည်လောက် ၀ယ်ဖိုပဆို၇င် သေသေချာချာ ရွေးတော့တာပဲ။ အသားကောင်းရဲ့လား အဆင်ကောင်းရဲ့လား၊ သေသေချာချာကို ရွေးတော့တာပဲ။ တကယ်ကတော့ လုံချဉ်အရွေးမှားလို့ ဘာမှ ဒုက္ခမရောက်ဘူးကွ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို အရွေးမှားရင် တစ်သက်လုံး ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်သက်လုံး လုပ်ရမည့် အလုပ်ကို သေသေချာချာ ရွေးပြီး စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်ရတယ်ကွ။ ငါ့ဆီမှာနေပြီး အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားစမ်းပါ မောင်ဘချစ်ရာဟု ပြောလေ၏။
“ထမင်းစားဖို့ အလုပ်တစ်ခုခုတော့ လုပ်ရမယ် မဟုတ်လားဗျဟု မောင်ဘချစ်က မေးမြန်းရာ ဦးဂွမ်တီက…
အဲဒီလို စိတ်ကူးမျိုးဟာ တော်တော့်ကိုသနားစရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးမျိုး ကိုယ်လူရဲ့။ ထမင်းစားဖို့လောက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ လူဟာ ဘယ်မှာ ထူးချွန်မှာလဲကွ။မင်းတစ်ခု စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ မင်းလဲပဲ ရွှေကျီး မင်းကုမ္ပဏီမှာ ငွေကိုင်စာရေး လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဘာများ အမြတ်ထွက်ခဲ့သလဲ။ဒါကြောင့် တစ်သက်လုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ရွေးချယ်ရမယ် ကိုယ့်လူဟု ပြန်ပြောလေ၏။
အဲဒီလို ရွေးချယ်ဖို့ဆိုရင် ၀ါသနာကို အရင်းခံပြီး စဉ်းစားရမှာလား ဦးဂွမ်တီ…..
အဲဒါလည်း ပြောရဦးမယ်.. ၀ါသနာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်း မရွေးနဲ့ဦး။ ၀ါသနာဆိုတာက တော်တော် ထူးဆန်း တယ်က။ ဒုက္ခရောက်မယ့် အလုပ်ကိုမှ ၀ါသနာပါတာမျိုး ရှိသေးတယ်ကွ။ ဥပမာကွာ အဂ္ဂိရတ်ထိုးတာတို့ ၊ ဘီးလိယက် ထိုးတာတို့ ၀ါသနာပါတယ် ဆိုပါတော့ကွာ။ အဲဒီ ၀ါသနာကလည်း အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးကွ။ ဒါကြောင့် ၀ါသနာ တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း မဆုံးးဖြတ်ရဘူးကွ။
ဒီလိုဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ် ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ဦးစားပေးပြီး ရွေးချယ်ရမှာလား။
ဒီလိုလည်း မဟုတ်သေးဘူးကွ။ ကျွမ်းကျင်တာ တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း ရွေးချယ်လို့ မရပြန်ဘူး။ ကျွမ်းကျင်တာက ကျွမ်းကျင်တာ ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်တာက အောင်မြင်တာကွ။ မတူဘူး။ ဥပမာကွာ ကောလိပ် လှေလှော်အသင်း ၀င်ထားပြီး လှေလှော်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ လှေလှော် ကျွမ်းကျင်တာပေါ့ကွာ။ အဲဒါနဲပဲ သူဟာ ကောလိပ်ကျောင်းက ထွက်တဲ့အခါ လှေလှော်စားရတော့မှာလားကွ။
ဒီလိုဆိုရင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ဘယ်လိုများ ရွေးချယ်ရမှာလဲ ပေါက်ဖော်ကြီးရယ်…
ကဲ.. သေသေချာချာ နားထောင်ပေတော့ကွ။
လူတစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လောက်တောင် ဟန်ကျပန်ကျ ဖြစ်ခဲတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာအလုပ်။ ဥပမာ ဘိုင်စကုတ်မင်းသားအလုပ်တို့။ စာရေးဆရာ အလုပ်တို့။ ဂီတသမားအလုပ်တို့။ ကြော်ငြာ ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်တို့ စတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကို မရွေးချယ်ရဘူးကွ။ ဒီအလုပ်မျိုးတွေက အောင်မြင်ရင်တော့ အလွန် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ မအောင်မြင်ရင် ရေစုံမျှောမယ့် အလုပ်မျိုးတွေက။ ဒါကြောင့် ကြပ်ကြပ် ရှောင်ပါ။
အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် လနဲ့ နှစ်နဲ့ ချီပြီး လေ့လာစဉ်းစား ပြီးမှသာ ငါ ဘာလုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။
အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းအလုပ်အဖြစ် ဗေဒင်ဆရာဆီက ဟောချက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးကွ။ ဗေဒင်ဆရာကတော့ ကမ္မဇီဝဂြိုဟ်ဟာ ဘယ်ဂြိုဟ်ဖြစ်လို့သာ ဘာအလုပ်လုပ်လို့သာ ဟောမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့စကားကိုလည်း မယုံနဲ့ဦးကွ။ အဲဒီ ဗေဒင်ဆရာကိုယ်တိုင်က ဘယ်ဂြိုဟ်တွေ ဘာဖြစ်နေလို့ ဗေဒင်ဆရာ ဖြစ်လာတာလဲ ဆိုတာတောင် မစဉ်းစားမိတဲ့ ဗေဒင်ဆရာက များတယ်ကိုယ့်လူ….
လောကမှာ ငါဟာဖြင့် ဒီအလုပ် တစ်မျိုးတည်းဖြင့် သင့်တော်တဲ့လူလို့ ကိုယ့်ကိုကို မထင်မိလေနဲ့ကွ။ အနည်းဆုံး အလုပ်သုံးလေးမျိုး လုပ်နိုင်စွမ်းတာချဉ်းပဲ။
အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းအလုပ်ကို ရွေးချယ်ပြီဆိုရင် အဲဒီ အလုပ်က ၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုဟ်တွေဆီက အကြံ ဉာဏ်ကို မရမကွ။ အဲဒီအချက် (၅)ချက်ကို သေသေချာချာ မှတ်ပြီး အချိန်ယူ စဉ်းစားစမ်းပါ မောင်ဘချစ်ရာဟု ပြောဆိုလိုက်လေတော့၏။
အောက်ပါဖော်ပြထားတာတွေကတော့ နေ့နံအလိုက် အကျိုးပေးမယ့် အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖတ်ပြီး မိမိ ရွေးချယ်ရခက်ခဲနေတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စာပေ ၊ စက်ဘက် ။ စစ်ဘက် ၊ ဆေးဘက်။
၀န်ထမ်းအလုပ် ၊ လခစားအလုပ် ၊ နိုင်ငံရေးအလုပ်။
ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. အဘအလွမ်းပြေအနေနဲ့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ်
၀တ္ထုဖတ်ရင်းနဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ့လို့ ရေးလိုက်တာပါ။ ခုခေတ် ၁၀ကျော်သက်
လူငယ်လေးတွေ အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်ရာမှာ အရမ်းပေါ့ပေါ့လေးတွေးပြီး လုပ်နေကြတယ်။
အလုပ်တစ်ခုမကောင်း တစ်ခုပြောင်းနဲ့ အချိန်တန်တော့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာလည်း အဖတ်မတင်၊
၀င်ငွေလည်း အဖတ်မတင်နဲ့ အချိန်ကုန် အသက်ကြီးသွားတာ ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ထိုအလုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားရမယ်။
ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်အမြဲသစ္စာရှိနေရမယ်ဆိုတာလေး သိစေချင်ရယ်ပါ။
မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေ
ကိုရင်ရေ ကျုပ်က သောကြာသားပါ
ခရီးဝေးသွားရတဲ့ အလုပ်က ကျုပ်နဲ့ အဆင်မပြေဘူးဗျ
ဒါကြောင့် အဆင်ပြေတာလုပ်ရင်း စာဖတ်စာရေးတယ်
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခရီးသွားရင် စားသောက်စရိတ် အလကားတင်မက သွားစရာကားတို့ ပိုက်ဆံချေးတာတို့ပါ အဆင်ပြေတာကလား။ အခွက်တော့ ပြောင်ရတာပ။
ကိုရင်ပေက သောကြာသားဆိုရင် မွေးရပ်မြေမှာထက် တနယ်တခြားမှာ
သွားအလုပ်လုပ်ပါ။ မွေးရပ်မြေမှာ အဆင်ပြေပေမယ့် ငွေအဖတ်မတင်တတ်ဘူး
ရသလောက် ပြန်ကုန်လိမ့်မယ်…။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်… ဘယ်တော့
ကိုရင်ကော သောကြာသားကြီး ကိုရင့်ပေဆီ ခရီးဝေလာပြီး…
မင်္ဂလာထမင်း စားရတော့မှာလဲဟင်… :D :D :D
လိုက်လေ ဝေးလေ ဖြစ်လာလို့ 
“အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် လနဲ့ နှစ်နဲ့ ချီပြီး လေ့လာစဉ်းစား ပြီးမှသာ ငါ ဘာလုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။” ဆိုတာကိုတော့ မထောက်ခံတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆နှစ်လောက်က ဘ၀ပေး အခြေအနေရယ် အချိန်အခါရယ်က စကားပြောနေတော့ အလုပ်(၀ါ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် ဘာမှလည်း ရွေးချယ်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူးရယ်။ ကိုရင်ပြောသလို နေ့နံကိုက်လို့လားတော့ မသိဘူးဗျာ သွားလိုက်ရတဲ့ အသွား ဒီနေ့အထိ မနားရသေးဘူး။ အောင်မြင်မှုဆိုတာတက် ဘ၀ရပ်တည်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ် အခုမှရောက်တုန်းလို့ဘဲ ယူဆပါတယ်…..တနေ့နေ့တော့ဖြင့်………………။
ကျွန်တော်က ဇောက်ထိုး ဆိုတော့ ခုစာရေးတဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုက်တာပေါ့ နော်..ကိုရင်…
လက်တွေ့မှာဒေါ့ နှစ်မျိုးဗဲရှိမယ်ထင်ဒယ်။ ဖြစ်ချင်ဒါ ဇွတ်တိုးလုပ်သူ၊ ဖြစ်သင့်တာ ဦးစားပေးသူ။ ပြောလေ့ရှိဒါတော့ ကိုယ်စိတ်ပါရာလုပ်ပါဗဲ သို့ပေသိ ဒုတိယ အမျိုးအစားဂ အများစု ဖြစ်မယ်။ ဥမပါ ဘီလ်ဂိတ် စတိဂျော့ဗ် မက်ဇူကာဗက်ခ် တို့ဆိုရင် ခံစားမှုဂို ဦးစားပေးရင်း ပေါက်မြောက်သွားသူဒွေ..။ အောင်မြင်လို့ပေါ့ဗျာ လူမသိ သူမသိ ကျဆုံးသွားသူများ အဆရာထောင် ပိုများမယ်ထင်ဒယ်။ အဆိုဒေါ် မက်ဒေါလားလား မသိဘူး ငယ်စဉ်အိမ်ပြေးဘဝနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ဒါ.. သူ့လိုမဟုတ်ဘဲ လမ်းဘေးရောက်သွားသူများ ကြတော့ရော..။ တဖက်မှာလည်း ဖြစ်သင့်ဒါ ဦးစားပေးလိုက်ရင်း အခွင့်ကောင်း အခါကောင်း လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားဂျဒါ တပုံဂျီး….။ ပြန်ချုပ်လိုက်ရင် ဘယ်ဟာဖြစ်သင့်ဒယ်ဆိုဒါ သိလိုက်ချိန်မှာ နှောင်းသွားဘီ။ ယူအက်စ်မှာလိုပေါ့ လခစားလုပ်သူဂလည်း ဆူရှီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြည့်ပြီး ကျောင်းအတက်မှားဂဲ့လေဂျင်း နောင်တရဒယ်… ဆူရှီးပိုင်ရှင်သူဌေးဂလည်း လခစားအမှုထမ်းတွေကိုကြည့်ပြီး အလုပ်ပဲကြုံးရုန်းလုပ်နေဂဲ့မိဒါ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးဂ အောင်မြင်ကြီးပွားနေသူများဂိုဗဲကြည့် ကောက်ချက်ချဂျဒါဂိုး…။
မှန်တာပြောရလျှင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံက အလုပ်လုပ်သူတော်တော်များများဟာ အလုပ်ကို စိမ်ပြေနပြေရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်ရေးမရကြပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူများအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်ရဲ့ လစ်လပ်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ခွင့်ရမရဆိုတာမျိုးကွာလို့ပါပဲ ။ ကိုယ့်မှာ လုံလောက်တဲ့အရည်ချင်းရှိစေဦးတော့ လစ်လပ်နေရာမရှိလျှင်လည်း … အလုပ်မရနိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ် ။
နောက်ပြီး အလုပ်မ၀င်ခင် ဘယ်လိုပဲ ပြင်ဆင်ပြင်ဆင် … အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာ ချွတ်ချော်နေတာလေးတွေကတော့ ရှိစမြဲပါ .. သင်ထားတဲ့ ပညာရပ်တွေ ၀င်တဲ့အလုပ်မှာ အသုံးပြုခွင့်မရတာမျိုးတွေလည်း ကြုံတတ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ….. (ကျွန်မအတွေး) အလုပ်တစ်ခုခုက လေ့လာစရာသင်ယူစရာတွေရှိမယ်ဆိုလျှင် …. ဘယ်နေရာမှာမဆို ၀င်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။မတူညီတဲ့အလုပ်ခွင်မှာ ရသလောက်လေး သင်ယူရပါမယ် ။ ဒါမှသာ အလုပ်ခွင်ကထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွေ့ကြုံရမှာပါ ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အဖက်ဖက်က စဉ်းစားပြီးမှ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အလုပ် ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ ကတောက်ကစဖြစ်စရာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လေ .. .အကောင်းဆုံးကတော့ … လေ့လာလို့ရမယ့် နေရာမျိုးမှာ ၀င်လုပ်ပြီး …. တတ်နိုင်သလောက်မခိုကပ်ပဲလုပ်လျှင် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ် … ။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခကို အစဖေါ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုရင်ရေ..။
ကျုပ်က သူ့ဝတ္ထုထက် သူ့စာကိုကြိုက်တာ။။ သူ့ဇတ်လမ်းထက် သူညှပ်ထည့်တဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေကိုကြိုက်တာ..။
တချို့က ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့်အလုပ်ကို ရွေးချယ်ဘို့ ကြိုးစားတယ်။
နေပါဦး အဲဒီတော့ ဘယ်အလုပ်က ကိုယ်နဲ့တကယ်အဆင်ပြေမယ်လို့
အလုပ်ဆိုတာ ( သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ဆိုတာ )
ဇတ်စင်ကို ပွဲထွက်တုန်း ရှေ့ကကြည့်သလိုပဲ
မင်းသမီးလှလှလေးတွေနဲ့၊ ရာဇပလ္လင်ကြီးနဲ့၊ မူးကြီးမတ်ရာတွေနဲ့၊ စောင်းညှင်းပတ္တရာတွေနဲ့
ကိုယ်တိုင်တောင် ၀င် က ချင်လာတတ်တယ်..။
ဇတ်ထဲလိုက်မိတော့မှ ဇတ်သမားတွေဘ၀ကို အမှန်အတိုင်းတွေ့ရသလိုပဲ…
ဇတ်ထဲကတော့လဲ ရုတ်တရက် အလွယ်တကူမထွက်နိုင်ပြန်ဘူးနော…။
ကိုယ်က ဘာကိုမှ ထိုင်ရွေးနေတာ မဟုတ်ပေမင့်
ရှိတတ်ပြန်ပါတယ် ကိုရင် ငှက်ကြီးရေ…။
ကျနော်တို့ကတော့ ဒီဘုံဘ၀မှာ ကြုံသမျှကို
ဦးဦး ပလာယာ မန့်သွားတာ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀နဲ့
အလုပ်ကပဲ ကိုယ့်ကို ရွေးရွေး
ကိုယ်ကပဲ အလုပ်ကို ရွေးရွေး
ကျနော်ကတော့ ကျနော်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တဲ့ ခံယူချက်တော့ ထားပါတယ်ဗျာ..
ဒီနည်းတော့ အကြံမပေးပါနဲ့ ကိုရင်ရယ်… နှစ်နဲ့ချီပြီး စဉ်းစားနေရင် မိသားစုတွေ ဘာနဲ့သွားစားမလဲ ကိုရင်ရယ် ကြည့်လည်းလုပ်ပါဦး။ သူကျွေးထားမှာကျနေတာပဲ…
မစိတ်ပိစိကွေးရေ… လူတစ်ယောက်က တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်
ခေတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ အတွေးအခေါ် လုပ်ရပ်တွေ မှန်ကန်ဖို့လည်း
လိုပါသေးတယ်… အလုပ်တစ်ခုကို ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီးရွေးရင်
မှားသွားမှာပေါ့ဗျာ… (ကျနော်က အဘစာပေကို ပြန်လည် အစထုတ်ပြီး
သေချာစဉ်းစားပြီးမှာ လုပ်စေချင်တာပါ။ တစ်ပတ်လည်း ဖြစ်မယ်၊ တစ်လလည်း
ဖြစ်မယ်၊ နှစ်လလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ) ထိုင်စောင့်နေတာထက်စာရင် သင့်တော်တဲ့ အုလပ်လေးတစ်ခု ၀င်လုပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းရယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ထက်သန်သော စိတ်ဓါတ်၊ ၀ါသနာနဲ့ ပေါင်းစပ်မှ တိုးတက်နိုင်တော့မှာ
လူတစ်ယောက်မှာ အနည်းဆုံးတော့ ဘ၀အတွက် Plan ရှိရမယ်.. ရေတိုစီမံကိန်း
ရေရှည်စီမံကိန်း၊ အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်မှပဲ ဘ၀ဆိုတာ
ဖော်ရက်စ်ဂန့်ထဲက မင်းသား နမူနာလိုပေါ့…(ကျုပ်အထင်ပါ)
တစိုက်မတ်မတ် ဇွဲလုံ့လထားပြီးလုပ်တော့ နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုဆိုတာရောက်ရှိလာမယ်။
အမှန်ကအလုပ်ကသူတို့ ကိုရွှေးသွားတယ်လို့ ယုံတယ်
ကျုပ်က အင်္ဂါဆိုတော့ ဆေးဘက်မှာ လုပ်မယ်ဗျာ
အူးဗိုက်.. က အင်္ဂါဆိုတော့ အနေအေးပေမယ့် စိတ်ကြီးမယ့်ပုံဖြစ်မှာနော်..
အင်္ဂါသား တော်တော်များများက ပြန်မပြော နားမထောင် ကုပ်ကမြင်းဖြစ်တာများတယ်… ဟိ..
ဆေးအလုပ်အပြင် အရက်ချက်စက်ရုံ၊ ဘီယာဆိုင်၊ ဘီအီးဆိုင်
ဖွင့်မယ်ဆိုလည်း အထူးအောင်မြင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းရယ်ပါ…
ခင်ဗျား မှန်တာဒွေ လျှောက်ပြောဒယ်.
ခင်ဗျားကို အူးဗိုက်ကလေး တင်းတွားဘီ..
ဘီအီးဆိုင်ဖွင့်ရင် ခင်ဗျားကို အကြွေး မသောက်ခိုင်းဒေ့ါဘူး..၀ူး.ဟူး.
တားကို ဘီအီးဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အရင်းနှီး ပုန်းတစ်ရာလောက် ချီးစမ်းဘာ
yes you are right! but sometime we have no much opptunity to choose,,,so try our best for what is in our hand first till we reach our interest,,thanks you.
ကိုရင်စည်သူရေ ### ရွေးချယ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခု လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်လောက်အရောက်မှ စိတ်ပျက်မိနေရင် ရှေ့ဆက်လျှောက်သင့်သလား?? နောက်ပြန်လှည့်သင့်လား???
ဲမြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုလူတွေတော်တော်များပါတယ်၊ လက်ရှိအလုပ်မှာ တိုးတတ်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်တော့ အလုပ်အသစ်မှာ ဘဝကို ပြောင်းလဲမြှုပ်နှံလိုက်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ယူခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ အခု လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့က တခြားစီပဲ……..
ရန်ကုန်ရောက်စ လစာကာင်းတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အလုပ်ကို ၀င်လုပ်ရင်းနဲ့ ဒီအလုပ်က မထွက်နိုင်ဘူး..
ကိုယ့်ဘာသာရပ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကလည်း..လစာ က မကောင်း.တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူး……
အခုချိန်မှတော့ ထမင်းစား ဗိုက်ဝ ဖို့အတွက်….နောက်အလုပ်လည်း..မပြောင်းနိုင်တော့…ဒီမှာပဲ..ဆက်လုပ်နေရတာပါပဲ
ဟင်း……………..(သက်ပြင်းချသည်။) အလုပ်ကို အချိန်ယူပြီးတောင်မစဉ်းစားလိုက်ရပါဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလမ်းကြောင်းလို့ထင်တာကိုပဲ လိုက်ခဲ့လေတော့ အဲဒါနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေရတာပေါ့။ ငြိမ်းက တနင်္လာသမီးဆိုတော့ ခရီးသွားမယ့်အလုပ်၊ ကုန်သည်အလုပ် လုပ်သင့်တာပေ့ါနော်။ ဒါပေမယ့် ခရီးဆိုလို့ လောလောဆယ်ကို MICT ၀င်းထဲမှာပဲ ဟိုအဆောင်ကူး ဒီအဆောင်ကူးနေရပါတယ်။ Programmer ဆိုတာကတော့ ကုန်သည်အလုပ်ထဲမှာ မပါလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့နော်။
Nyein Nyein ရေ ” ရွှေးလွန်းလျှင်မရ သေးလွန်းလျှင်မလှ ”
ဟုတ်ပါတယ် မမနိုရာရယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့လည်း အလုပ်ဝင်လုပ်နေတာပေါ့။ အိမ်ကိုလည်း အားနာလို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျောင်းဆက်တက်ချင်တာပေါ့လေ……………. သို့ပေမယ့် သို့သော်လည်းပေါ့လေ။